Syringe avo lenta, vokatra fikarakarana be volo, syringe vaksiny - voarohirohy
1mL / 3mL Syringe amin'ny vaksiny Luer-hidy
Syringe faneriterena avo lenta ho an'ny Contract Media Injector
Transducer fanerena fanary ho an'ny mpanara-maso ny marary
Fitaovana fitarafana ara-pahasalamana
Syringe sy Tube be mpampiasa
Mianara bebe kokoa >>
ANTMED dia mpitarika tsena anatiny ao amin'ny sehatry ny indostrian'ny High Pressure Syringe sy Disposable Pressure Transducer. Manome vahaolana tokana an'ny CT, MRI ary ny DSA fampidirana tsindrona, fanjifana ary kateter IV tsindry. Ny vokatray dia amidy any amin'ny firenena maherin'ny 100 sy ny faritra toa an'i Amerika, Eropa, Azia, Oceania, ary Afrika.
ATNy indostrian'ny fitaovam-pitsaboana sinoa dia sehatry ny haingam-pandeha ary nanjary laharana faharoa amin'ny tsena fitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny anton'ny fitomboana haingana dia satria ny fiakaran'ny vidin'ny fahasalamana amin'ny fitaovam-pitsaboana, fanafody, hopitaly ary fiantohana ara-pahasalamana. Ankoatra ny ...
Ny indostrian'ny fitaovam-pitsaboana sinoa dia sehatry ny haingam-pandeha ary nanjary laharana faharoa amin'ny tsena fitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny anton'ny fitomboana haingana dia satria ny fiakaran'ny vidin'ny fahasalamana amin'ny fitaovam-pitsaboana, fanafody, hopitaly ary fiantohana ara-pahasalamana. Ankoatra ny ...
Ny syringe Luer-hidy dia be mpampiasa any amin'ireo firenena tandrefana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia malaza kokoa ny syringe luer-slip noho ny vidiny ambany. Ny famolavolana slip kokoa dia toa tsotra - azonao atao ny mampiditra azy io. Nefa tsy ny fanamorana izany, fa ny olana ara-pahasalamana lehibe mifandraika amin'ny ...